Shina Womens orinasa ambony sy mpanamboatra Top | AIKA
Iray amin'ireo entana malaza indrindra amin'ny akanjo fitondra ho an'ny vehivavy dia ny tampon-tanana na palitao fanaovana fanatanjahan-tena. Araho ny tari-dalanay hahitanao izay karazana mety indrindra aminao sy ho an'ny ambony
toro-hevitra amin'ny fomba.
Fomba ambony tsy tanam-behivavy
Raha miresaka momba ny fiasana dia misy karazany maro ny fomba azontsika safidiana amin'ny akanjo fanaovana akanjo tsy misy tanany. Ireto ny sasany amin'ireo tsara indrindra sy malaza indrindra.
Miverina racer tampon-gym vehivavy avelao ny fahalalahana mihetsika manodidina ny vodin-tsoroka, miantoka ny fatoranao mijanona eo am-panaovana hetsika sarotra, ary
avelao ny hoditrao hiaina amin'ny toerana ilainy indrindra. Tsy toy ny fehin-kibo nentim-paharazana, ny racer back back dia tsy hianjera amin'ny sorokao rehefa mihetsika ianao ary ho bebe kokoa
mamaly mandritra ny fotoana sarotra.
Ny tampon'akanjo tsy misy tanany miaraka amin'ny voapaika dia manome fivoaran'ny rivotra sy fomba fanao mahafinaritra. Tonga lafatra ho an'ny fivoriana hatsembohana fanampiny sy fampihetseham-batana mafana, tapaka
ny gym an-tampon'ny ivelany dia ahafahan'ny rivotra miaina sy ny hatsembohana rehetra etona ary hampihena ny risika hikorontana. Tsy izany ihany fa afaka jerena ireo notapahana
mampino lamaody sy manintona.
Ny tampon'ny strappy dia be mpitia tato ho ato satria lasa lamaody bebe kokoa ny famelana ny volanao fanatanjahantena miloko na maodely. Tendrombohitra mahavariana
manomeza fisaka mendri-piderana izay maivana indrindra, na izany aza, kely fotsiny ny fanohanana amin'ny soroka sy ny tratra ka tsara kokoa ity ho an'ny fampiofanana milamina kokoa
fivoriana toy ny yoga na Pilates.
Ny lohan'ny loaka mitete dia misy lavaka sandry malalaka izay mamela fahalalahana bebe kokoa ho an'ny hoditrao miaina ambanin'ny sandrinao. Ireo karazana gym ambony ireo koa
tsara raha manahy ianao amin'ny patsa-tsemboka satria misy toerana bebe kokoa manodidina ny ambany sandry fa tsy fitaovana henjana sy clingy.
Ny tampon-bokatra dia miasa tsara amin'ny fahavaratra na ho an'ny fanatanjahan-tena fampiofanana izay tsy voatery ilanao fiarovana. Miasa amin'ny lozam-boankazo na fanatanjahan-tena fotsiny
raha tsy misy akanjo lava ambonin'ilay tampony dia tsy ho an'ny olon-drehetra, fa ny vehivavy sasany dia aleony tsy manana akanjo akaiky mametra azy ireo ary mahatsiaro ho tony kokoa ary
mahazo aina amin'ny fitaovana kely kokoa.
Matetika ireo dia notampenin'ireo lehilahy tao amin'ny gym hanetsiketsika ny hozany, fa ny vehivavy kosa afaka mampihetsi-po ihany koa. Ny fitambaran-tady dia mamela ny fahalalahana mihetsika ao amin'ny
soroka soroka ary afaka miasa ho an'ny vehivavy raha mbola eken'izy ireo amin'ny bra fanatanjahan-tena manohana.